Ndeapi Mabhenefiti Atinogona Kuwana Kubva kuPea Supplement
Palmitoylethanolamide (Pea) tsananguro
Pane zvakataurwa kuti Kudya neDrug Administration yakatenderwa kuendesa chikumbiro chekiriniki yekuyedza kurapa COVID-19 nekushandisa mushonga wekugadzira unotevedzera zvinoitwa nemorekuru rinowanikwa mumbanje.
Iyo yekugadzira mishonga, inonzi ultramicronized palmitoylethanolamide (micro PEA), inofungidzirwa kuti inoshanda senge inorwisa-kupisa. Palmitoylethanolamide (PEA) i "inowanzoitika fatty acid" yakafanana ne endocannabinoid, imwe ye suite yemamorekuru anowanikwa mu cannabis mune ayo anotora ma CB2 receptors. CB2 receptors inofungidzirwa kuenzanisa zvese kuzvimba uye kurwadziwa mumuviri wemunhu.
Sezvo [micro PEA] yanga ichishandiswa muEurope kwemakore makumi maviri, vamwe vatapi vezvehutano vekuItaly vaikurudzira kushandiswa kweiyo micro PEA kurapa varwere veCOVID-20 uye ivo vaiwana kumwe kubudirira.
Yakakura COVID-19 inoratidzirwa neinopfuura-exuberant kupisa mhinduro iyo inogona kutungamira kune cytokine dutu. "Micro PEA haisi mhondi inouraya, asi ivo vanotenda kuti inogona kudzikamisa iyo immune immune mhinduro, iyo inogona kuuraya.
Chii chinonzi Palmitoylethanolamide (PEA)?
Palmitoylethanolamide (PEA) ndeye lipid inoitika neakasikwa mumuviri wedu muchikamu chemafuta acid amide. Ndokubva yangove endo native lipid. PEA zvakare yakagadzirwa nenzira yemasikirwo mumiriwo nemhuka.
Palmitoylethanolamide (PEA) inogona kuwanikwa muchikafu chakadai semukaka, soya bhinzi, mapizi ebindu, soy lecithin, nyama, mazai nenzungu.
Mubayiro weNobel Mubayiro Revhi-Montalcini akacherekedza Palmitoylethanolamide (PEA) semolekoro inowanzoitika, ichitsanangura kukosha kwayo mukurapa hutachiona husingaperi nemarwadzo. Kutevera kuwanikwa kwake, mazana ezvidzidzo zvesainzi akaitwa kuratidza kuti inoshanda kwazvo uye yakachengeteka kushandisa. Palmitoylethanolamide (PEA) inotsanangurwa muzvinyorwa zvesainzi se zvisikwa painkiller.
Phcoker inyanzvi yekugadzira kugadzira Palmitoylethanolamide (PEA) poda
Kurumidza kutumira kubvunza: Cont Cont us
Palmitoylethanolamide mabhenefiti - Chii chinonzi Palmitoylethanolamide inoshandiswa?
Palmitoylethanolamide (PEA) ine mafuta acid acid uye inogadzirwa uye inoshanda mukati memuviri wedu kudzora kwakawanda mabasa. Iyo endogenous fatty acid amide, iri yekirasi yenyukireya factor agonists. Palmitoylethanolamide (PEA) yakanyatso kuve yakawanikwa zvakanyanya mumhando dzakawanda dzekupomhodza mhuka mhando, pamwe nemuyedzo dzinoverengeka dzekurapa.
Iyo yepanyama inorwadza uye inogona kushandiswa pakurwadziwa kusingaperi uye kuzvimba. Inoitawo zvimwe zvinobatsira senge neuropathic ache, fibromyalgia, akati wandei sclerosis, kukuvara kunodzokorodza, kutapukirwa kweturakiti rekufema, uye zvimwe zvakawanda zvinetso.
Mimwe yemabhenefiti anonzi Palmitoylethanolamide anosanganisira;
i. Inotsigira hutano hwehuropi
Palmitoylethanolamide inobatsira mukuvandudza hutano hwehuropi inosanganiswa nekugona kwayo kurwisa kuzvimba kwemukati uye nekusimudzirwa kwemasero e neural anopona. Izvi zvinocherechedzwa zvakanyanya nevanhu vari kurwara nemutsipagenerative kusagadzikana uye kurohwa.
Semuenzaniso, mune ongororo yevanhu mazana maviri nemakumi mashanu vanotambura nesitiroko, palmitoylethanolamide supplement yakapihwa pamwe chete ne luteolin yakawanikwa ichisimudzira kupora. PEA yakawanikwa ichisimudzira ndangariro, hutano hwese hwehuropi pamwe nekushanda kwezuva nezuva. Iyi mhedzisiro ye palmitoylethanolamide powder yakaonekwa mazuva makumi matatu mushure mekuwedzera uye ikawedzera pamusoro pemwedzi mumwezve.
ii. Deredza kubva pakurwadziwa kwakawanda uye Kuzvimba
Masayendisiti anopa hufakazi hwakawanda hwealmitoylethanolamide kurwadziwa nekubvisa zvinhu. Sezvineiwo, Palmitoylethanolamide inopa zororo rekurwadziwa kune dzakasiyana siyana dzekurwadziwa uye kuzvimba. Zvimwe zvidzidzo zvinoratidza Palmitoylethanolamide marapirwo ezvemukati mekurwadziwa zvinhu;
Mune chidzidzo chinosanganisira mhuka, palmitoylethanolamide chinamatidzwa pamwe nequercetin yakawanikwa ichipa zororo kubva pakurwadziwa pamwe chete pamwe nekuvandudza kushanda pamwe pamwe nekudzivirira shwashwa kubva mukukuvara.
Zvimwe zvidzidzo zvekutanga zvinoratidza kuti PEA inogona kubatsira kudzikisira kurwadziwa kwemhodzi mune varwere vane chirwere cheshuga (chirwere cheshuga).
Mune kumwe kuongorora kwakaitwa nevanhu gumi nevaviri, muchikamu che Palmitoylethanolamide chemakumi matatu nemairi 12 mg / zuva rakapihwa kwemavhiki matatu kusvika makumi masere nemasere akawanikwa achideredza kuwedzera kwekurwara kusingaperi uye neuropathic kurwadziwa.
Kuongororwa kwevarwere makumi masere vanorwara neFibromyalgia syndrome vakawana kuti PEA kuwedzera kune mamwe mishonga yekukanganisa inogona kudzikisira kurwadziwa.
Kupfuurirazve, zvimwe zvakati wandei zvidzidzo zvinotaridza kurwadziwa kwepalmitoylethanolamide kusanganisa kuregedza kurwadziwa kwepelvic, kurwadza kwechivanhu, kurwadziwa shure, kurwadziwa kwekenza pakati pevamwe.
iii. Inobatsira kuderedza zviratidzo zvekuora mwoyo
PEA zvisina kunangana zvinokonzeresa vanogamuchira vanokonzeresa manzwiro. Zvimwe zvidzidzo zvinoratidza palmitoylethanolamide kushushikana kwekushushikana sebasa rakakosha pakurwisa kushushikana.
Mukuongororwa kwe58 varwere vane kushungurudzika, Palmitoylethanolamide inowedzera pa1200 mg / zuva pamwe neantidepressant mushonga (citalopram) inorapwa kwemavhiki matanhatu akawanikwa achivandudza zvikuru mamiriro uye zviratidzo zvekushungurudzika.
iv. Inobvisa dzihwa
Palmitoylethanolamide inobatsira mukurwisa kutonhora chaiko kuri mukukwanisa kwayo kuparadza hutachiona hunokonzeresa kutonhora (yefuruwenza hutachiona). Zvinoshamisa kuti kutonhora kunoitika kazhinji uye kunobata munhu wese kunyanya vanhu vane immune immune.
Kuongororwa kwakaitwa nevarwi vadiki mazana mapfumbamwe kwakaratidza kuti palmitoylethanolamide dosage ye900 mg pazuva yakaderedza nguva yakatorwa neiye mutambi kuti apore kubva kutonhora uye zvakare zviratidzo zvakaita sekurwara nemusoro, fivha uye kurwadziwa kwehuro.
v. Kunoderedza zviratidzo zve insular (akawanda) sclerosis
Nayo yakagadziriswa Palmitoylethanolamide anti-immune mali, PEA pasina mubvunzo yakakodzera kurapa multiple sclerosis.
Mukudzidza kwevarwere makumi matatu neviri vane chirwere chepamberi sclerosis, PEA yakawedzerwa kune yakajairika dose yeiyo interferon IFN-β29a yakawanikwa yekudzikisa kurwadziwa pamwe nekusimudzira hupenyu hwevarwere.
vi. Palmitoylethanolamide inovandudza metabolism
Palmitoylethanolamide (PEA) inokwanisa kusunga kune PPAR- α, inogamuchira inoitisa metabolism, chishuwo, kuonda uye mafuta anopisa. Kana iyo PPAR- α yekugamuchira ikasimudzwa iwe unowana masimba emagetsi epamusoro ayo anobatsira muviri kupisa mafuta akawanda mukurovedza muviri nokudaro unorasikirwa nehuremu.
vii. Palmitoylethanolamide inogona kudzikisira kudya kwako
Palmitoylethanolamide kurema kunogona kudonhedzwa inoratidzwa mukukwanisa kwayo kupesvedzera nzara yako. Zvakafanana nekuvandudza metabolism, kana iyo PPAR- α receptor yakaiswa inotungamira kune manzwiro ekuzara paunenge uchidya saka inokubatsira iwe kudzora huwandu hwemakorori anonwiwa.
Kupfuurirazve, PEA inoonekwa seane fatty acid ethanolamides inoita basa rakakosha pakudya maitiro. Mukuongororwa kwei overiectomized rats nehuremu hwakanyanya kuwana, PEA kuwedzera kune makumi matatu mg / kg yemuviri kwemavhiki mashanu akawanikwa achideredza zvakanyanya kudya kwavo kwekudya, mafuta akawanda uye nekudaro uremu hwemuviri.
viii. Palmitoylethanolamide anti-anogumbura mhedzisiro panguva yekurovedza muviri
Mumwe anogona kurwadziwa uye kuzvimba panguva uye mushure mekushanda nekuda kwekurema kwakanyanya. Huye, PEA yekuwedzera inogona kubatsira kudzivirira izvi nekumisikidza inorwisa-kupisa chiitiko chePPAR- α receptor. Palmitoylethanolamide inogona zvakare kudzivisa kuburitswa kweanopisa enzymes mune neayo adipose tishu.
Ndiani anofanira kutora supplement yePalmitoylethanolamide (PEA)?
Palmitoylethanolamide (PEA) yekuwedzera inokodzera kune vese vanotambura nekurwadziwa kana kutapuka uyezve chero munhu anofarira kurasikirwa uremu kungave pamushonga kana kwete. PEA yakaonekwa ichiwedzera kuwedzera kushanda kwemamwe madhiragi. Iyi sarudzo kune avo vasingawani zororo pakushandisa maronda akaurayiwa.
Palmitoylethanolamide kunetseka kunetseka hunhu hwakanakisa chero ani ari panjodzi yekuora mwoyo kana kutambura nekuora mwoyo anofanira kutora PEA ye.
Uyezve, imwe yaizokohwa yakawanda yePSA kubva kune yekuwedzera sezvo vagadziri vanotsvaga mafomesheni anowedzera Palmitoylethanolamide bioavailability mumuviri wako.
Chii chinonzi PEA chinobva?
PEA inogadzirwa nemaviri mumiviri yedu uye zvakare nemhuka nezvirimwa. Nekudaro, kune vanhu vane kurwadziwa kusingaperi kana kuzvimba, PEA inoitika isina kukwana saka iko kudiwa kwe PEA supplements.
Palmitoylethanolamide inogona kutorwa kubva kune zvekudya zvakapfuma mumapuroteni senge mukaka, nyama, soya bhinzi, soy lecithin, nzungu uye mapea ebindu pakati pevamwe. Nekudaro, iyo PEA inowanikwa kubva kune zvekudya zvinyorwa mune zvidiki zvidiki. Izvi zvinogadzira palmitoylethanolamide kugadzirwa kwakawanda kuchikosha kuzadzisa izvi zvekudya zvinodiwa.
PEA inokukwiridzira iwe here?
Phenethylamine uye Palmitoylethanolamide vese vanogona kudaidza PEA, asi zvigadzirwa zvakasiyana zvachose.
Phenethylamine (PEA) chinhu chinogadzirwa nemakemikari, yakasikwa monoamine alkaloid, uye inoteedzera amine, iyo inoshanda senge yepakati tsinga system inosimudzira muvanhu. Phenethylamine inokurudzira muviri kuti uite mamwe makemikari anoita basa mukushushikana uye mamwe mamiriro epfungwa.
Inotorwa mumadhora e500mg-1.5g pahuremu, maawa mashoma ega ega, PEA inopa mushandisi manzwiro euphoria, simba, kukurudzira, uye hutano hwese.
Nekudaro, ndapota nemutsa cherekedza kuti Phenethylamine (PEA) haisi Palmitoylethanolamide (PEA). Phenethylamine zvinowedzera hazvina kugamuchirwa neDFA yekushandisa kurapwa. Palmitoylethanolamide (PEA) chinhu chechisikigo chinogadzirwa nemuviri; inoshanda kwazvo uye yakachengeteka kushandisa sekuwedzera pakurwadziwa uye kuzvimba.
Ndiyo PEA supplement yakachengeteka?
Palmitoylethanolamide (PEA) chinhu chechisikigo chinogadzirwa nemuviri; inoshanda kwazvo uye yakachengeteka kushandisa sekuwedzera pakurwadziwa uye kuzvimba. Hapana yakashata palmitoylethanolamide mhedzisiro yakataurwa pamwe nekusawirirana kwakashata nemimwe mishonga.
Ndeipi mhedzisiro ye PEA?
Iko hakuna kwakakomba mhedzisiro mhedzisiro kana zvinodhaka-zvinodhaka kudyidzana zvakataurwa kusvika parizvino. Palmitoylethanolamide inogona kutorwa pamwe nechero chinhu. Inosimudzira marwadzo-kurerutsa mhedzisiro yeakare analgesics uye anti-inflammatories.
Palmitoylethanolamide yakachengeteka kana uine pamuviri?
Kwete kushandiswa nevakadzi vane nhumbu.
Palmitoylethanolamide inogona kubatsira zvinovaka muviri kugadzirisa kupisa uye kurwadziwa kusingaperi.
Inofanira chete kutorwa pasi pekutarisirwa kwechiremba.
Palmitoylethanolamide hafu yeupenyu - Zvinotora nguva yakareba sei kuti pea isashande?
Palmitoylethanolamide (PEA) inogona kutorwa pamwe chete nemimwe mishonga yekurwadziwa kana wega, sekurairwa nachiremba wako wezvehutano, kutsigira zororo rekurwadziwa.
Kubudirira kwekutambudzika kwekurwadziwa i8 hr
Mhedzisiro inoshanduka; mhedzisiro mukati me48 hr mune vamwe vanhu, asi shandisa kwemavhiki masere kuti uwane mhedzisiro, inogona kushandiswa kwenguva yakareba yekurwadziwa kusingaperi kwemitsipa.
PEA inoshanda sei pakurwadziwa?
Kutsvagurudza kwakaratidza kuti PEA ine anti-kupisa uye anti-nociceptive zvivakwa uye kuitora nguva dzose kunogona kukurudzira muviri wako kupindura kurwadza nekudzikisira mhinduro yemaseru etsinga maseru anokonzera kurwadziwa.
Palmitoylethanolamide inoshandawo zvisina kunangana kukurudzira zviitiko zvevamwe vanogamuchira akadai seanogamuchira cannabinoid. PEA zvisina kunangana inokurudzira iyo cannabinoid receptors (CB1 uye CB2) nekuita se enzyme (FAAH -fatty acid amide hydrolase) inobatanidzwa mukuputsika kweiyo cannabinoid anandamide. Iri rubatsiro mukusimudzira iwo mazinga eanandamide mumitumbi yedu, inova inoitisa zororo uye nekurwisa marwadzo.
Chii chinonzi PEA yekurwadziwa kwekutambudzika?
Palmitoylethanolamide (PEA) chinhu chechisikigo chinogadzirwa nemuviri; iyo inogarisa mafuta fatty acid amide, iri yekirasi yenyukireya factor agonists, uye inogona kushandiswa sekuwedzera pakurwadziwa uye nekuzvimba kurapwa. PEA ndeye yakasikwa, inodzivirira, ine mafuta mamorekuru anogadzirwa mumuviri wedu, kubatsira kutsigira myelin nerve sheaths yehutano hwakanaka hwebasa.
PEA iine mafuta asidi iyo inobatanidzwa mune akasiyana maseru mashandiro mukuzvimba uye kusingaperi kurwadziwa, uye yakaratidzirwa kuve ine neuroprotective, anti-kupisa, anti-nociceptive (anti-pain) uye anti-dhizaini zvivakwa. Izvo zvinoderedzawo gastrointestinal motility uye cancer cancer kuwanda, pamwe nekudzivirira iyo yevascular endothelium mumoyo weschemic. Kazhinji kune vanhu vane kusagadzikana kusingaperi, muviri haugadzire akakwana PEA, nekudaro nekutora PEA yekuwedzera kushomeka kwemuviri kunogona kubatsira pakubatsira kurapa aya mamiriro.
Pea inopesana nekuputika here?
Palmitoylethanolamide (PEA) inonakidza inorwisa-kupisa mishonga yekurapa uye inogona zvakare kuvimbisa kukuru kurapwa kwehuwandu hwe (auto) immune immune, kusanganisira yekuzvimba ura chirwere uye kuzvimba kwezvirwere zveCNS.
Pea yakanakira arthritis?
Palmitoylethanolamide (PEA) inopa bhenefiti yemajoini zvese maererano nekuderedza kukura nekugadzirisa kwekurwadziwa kusingaperi asi zvakare kubatsira kudzikamisa kufambira mberi kwekuparadzaniswa kwekubatana neArthritis.
Ndeapi akanyanya marwadzo ekurwadziwa kwemitsipa?
PEA (palmitoylethanolamide) yanga iripo kubvira ma1970 asi iri kuwana mukurumbira senhengo nyowani yekurapa kuzvimba uye kurwadziwa. Hapana kudyidzana kwezvinodhaka kana chakakomba mhedzisiro mhedzisiro yakaonekwa.
PEA yakaratidza kushanda kwekurwadziwa kusingaperi kwemhando dzakasiyana dzakabatana nemamiriro mazhinji anorwadza, kunyanya neuropathic (tsinga) kurwadziwa, kurwadziwa kwekuzvimba uye kurwadziwa kwevhisikiti senge endometriosis uye interstitial cystitis.
Ndingarapa sei kurwadziwa kwemutsipa kumba?
PEA mamorekuru ane mafuta anobatsira kutsigira myelin nerve sheaths yehutano hwakanaka.
Kushomeka kwemavhitamini kubva muboka B hakugone chete kukonzera tsinga kurwadziwa, asi zvakare kunowedzera.
Zvimwe zviratidzo zvisingafadzi zvinogona zvakare kuitika, senge kusuduruka, kutsunzunya uye kuruma kwemaoko nemakumbo, kunzwa sekunge munhu ari kufamba netambo ine minzwa kana mvere dzedonje kana kunyangwe chiveve che
Zvishoma vhitamini B1 zvinotungamira mukukanganisa mukushanda kwemitsipa uye zvichidaro kune neuropathy uye kurwadziwa kwemitsipa. Kana uchiwedzera vhitamini B1, kurwadziwa kunodzikira uye basa retsinga rinovandudza. Vitamin B1 inogona kutorwa pamwe nePEA, izvi zvinopa rutsigiro rwakakwana kune mashandiro emitsipa, inodzivirira kurwadziwa kwemitsipa kana kurwadziwa kunowedzera. Ongororo dzichangobva kuitika dzakaratidza kuti vanhu vazhinji vane kurwadziwa kusingaperi, vanhu vakura uye vane chirwere cheshuga vane huwandu husina kukwana hwemavhitamini aya muropa ravo. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei vanhu ava vasingakwanise kurapwa chete nemapiritsi ekunyaradza marwadzo; vanoda
kupfuura izvozvo. PEA pamwe B mavitamini anotsigira huta uye immune system mune mamiriro ekurwadziwa kwetsinga.
Palmitoylethanolamide ndeye cannabinoid?
CBD (Cannabidiol) is compounds inobviswa kubva kuhemp nembanje. Nepo muviri uchigadzira cannabinoids nechisikigo, CBD yakawedzerwa kusangana nezvinodiwa.
Cannabinoids ndiyo yemakemikari anoshanda emakemikari anogadzirwa mumuviri ane chekuita nekurangarira, kurwadziwa, kudya, uye kufamba. Masayendisiti anofungidzira kuti cannabinoids inogona kubatsira mukuderedza kuzvimba uye kusagadzikana, kuparadza maseru emukenza, ichipa zororo mumhasuru uye zvakare inowedzera kudya.
PEA is fatty acid amide yakagadzirwawo mumuviri uye inogona kutaurwa se cannabimimetic. Izvi zvinoreva kuti inoteedzerawo mabasa eCBD mumuviri wako.
Zvese zviri zviviri CBD uye PEA zvinoshanda zvisina kunangana nekudzivisa mafuta acid amide hydrolase (FAAH), ayo anowanzo kupaza anandamide uye kuideredza. Izvi zvinogumira kumatunhu akakwirira eanandamide. Anandamide Inoita chinzvimbo chakakura mumafungiro uye zvakare kukurudzira. Iwo akawedzera mazinga eanandamide anokanganisa maitiro endocannabinoid system.
PEA yakawana mukurumbira uye inokwikwidza neBDD. PEA inoonekwa senge yakachengetedzeka imwe nzira kuCBD nekuda kwezvinhu zviri pamutemo zvayakatarisana nayo uye nenyaya yekuti vanhu vazhinji havagone kutsungirira hurefu hwe 'ibwe' rinouya neCBD.
Uyezve, PEA yakachipa kwazvo pane CBD. Nekudaro, PEA inogona kushandiswa mukuwedzera kune CBD kuzadzisa synergetic mhedzisiro.
Pea ndeye endocannabinoid?
HAPANA, Palmitoylethanolamide (PEA) ndeye endocannabinoid-senge lipid muyananisi ane analgesic uye anti-anogumbura zvinhu. PEA inotsigira iyo ECS kuburikidza modulating endocannabinoid siginecha uye zvisina kunangana kumisikidza cannabinoid receptors.
Iyo endocannabinoid system (ECS) yakakosha yehupenyu system iyo inodzora uye kuenzanisa akasiyana siyana ehupenyu mabasa mumuviri. Kutsvagirwa kweECS kwakatungamira mukuzivikanwa kweasina chete endocannabinoids senge anandamide (AEA) uye 2-arachidonoylglycerol (2-AG), asiwo endocannabinoid-kunge lipid mamiririri senge palmitoylethanolamide (PEA). Aya endocannabinoid-semakemikari anowanzo govana nzira dzakafanana dzemagetsi dze endocannabinoids asi kushomeka kwekubatana kweiyo yakasarudzika cannabinoid receptor mhando 1 uye mhando 2 (CB1 uye CB2).
Palmitoylethanolamide (PEA) uye Anandamide
Palmitoylethanolamide uye anandamide zvakabatana zvakanyanya sezvo ivo vari vese endo native fatty acid amide inogadzirwa mumuviri.
PEA uye anandamide zvinonzi zvine synergistic mhedzisiro mukurapa kwekurwadziwa uye zvakare zvinowedzera zvinorwadza zvinouraya zvinoshandiswa.
Ivo zvakare vakaputswa pasi neakakora acid hydrolase enzyme mumuviri, nokudaro mhedzisiro inowanikwa kana ichishandiswa pamwechete yakawanda kupfuura kana ichishandiswa pane zvinowirirana.
Phenethylamine chinhu chemakemikari chinogadzirwa nemasikirwo nemuviri. Inoshandiswa zvakanyanya kusimudzira mutambo wemitambi uye zvakare inogona kubatsira kudzikisa kushushikana, rubatsiro mukudzikisira uremu uye kusimudzira mamiriro.
Palmitoylethanolamide kune rumwe rutivi iine fatty acid amide inozivikanwa zvakanyanya kurwadziwa uye kushungurudza kupora.
Makomendi maviri aya haana hukama. Chinhu choga chinovabatanidza ndechekuti ivo vaviri vakapfupikiswa sePSA.
Ini ndinotora sei Palmitoylethanolamide (PEA) yekuwedzera?
Nepo isu takasimbisa iyo Palmitoylethanolamide inodzivirira-kuponesa kubatsirwa pakati pezvimwe zvakanaka, zvakakodzera kuunza kwauri mamwe chokwadi nezve PEA. PEA inoitika munzvimbo hombe uye isina kunyorova mumvura, izvi zvinoita kuti Palmitoylethanolamide bioavailability uye kunyudzwa ishoma.
Nhau dzakanaka, zvisinei, ndedzekuti vagadziri vanonongedza mafomesheni anowedzera Palmitoylethanolamide bioavailability yekushandiswa kwakanyanya mumuviri wako. Kune izvi, PEA upfu anowanikwa mune yakajairwa poda fomu uye micromized powder fomu
Ndekupi kwekutenga Palmitoylethanolamide (PEA) poda?
Tiri munguva inonakidza apo zvitoro zvepamhepo zvave shopu imwechete yezvinhu zvese zvinosanganisira palmitoylethanolamide hombe zvinhu. Kana iwe ukafunga kutora PEA, tsvagurirazvakawanda kune legit palmitoylethanolamide yakawanda yekuwedzera vagadziri. Vazhinji vashandisi vepalmitoylethanolamide vanoitenga kubva kuzvitoro zvepamhepo uye vanofanirwa kufunga nezvenyaya yavo yeakanakisa PEA poda mumusika.
CB1: Cannabinoid mhando I receptor
CB2: Cannabinoid yerudzi rwechipiri receptor
CENTRAL: Cochrane Central Rejista yeMiedzo Inodzorwa
FAAH: Mafuta-asidhi amide hydrolase
PRISMA-P: Inosarudzika Kushuma Zvinhu zveZvakagadziriswa Ongororo uye Meta-Kuongorora MaProtocol
VAS Pain: Inoonekwa Analog Scale yePain
 Artukoglu BB, Beyer C, Zuloff-Shani A, et al.  Kubudirira kwe palmitoylethanolamide yekutambudzika: meta-ongororo. Chiremba wePain 20; 5 (353): 362-XNUMX.
 Schifilliti C, Cucinotta L, Fedele V, et al. Micronized palmitoylethanolamide inoderedza zviratidzo zvekurwadziwa kweuropathiki mune vane chirwere cheshuga. Pain Res Treat 2014; 2014: 849623.
 Keppel Hasselink JM, Hekker TA. Therapeutic utility ye palmitoylethanolamide pakurapa kweuropathic kurwadziwa kwakabatana neakasiyana maronda mamiriro: kesi nhevedzano. J Pain Res 2012; 5: 437-442.
 Keppel Hasselink JM, Kopsky DJ. Basa repalmitoylethanolamide, iyo autacoid, mukurapa kunoratidzira kweanopwanya tsandanyama: matatu kesi nyaya uye ongororo yemabhuku. J Clin Nyaya Rep 2016; 6 (3).
 Costa B, Colombo A, Bettoni I, Bresciani E, Torsello A, Comelli F. Iyo inogumira ligand palmitoylethanolamide inoderedza marwadzo europathic kuburikidza nemast cell uye microglia modulation. 21st Yegore Symposium YeInternational Cannabinoid Research Society. St. Charles, Il. Usa: Pheasant Mhanya; 2011.
1.Palmitoylethanolamide (PEA) kuongorora
2.Iyo chii Palmitoylethanolamide (PEA)?
3.Palmitoylethanolamide mabhenefiti - Chii chinonzi Palmitoylethanolamide?
4.Ndiani anofanira kutora supplement yePalmitoylethanolamide (PEA)?
5. PEA inoshanda sei pakurwadziwa?
6. Palmitoylethanolamide inokonzerwa ne cannabinoid here?
7.Ndinotora sei Palmitoylethanolamide (PEA) yekuwedzera?